Mohamed Salah oo ammaan gaar ah ka helay halyeeyga reer Brazil ee Cafu – Gool FM
Mohamed Salah oo ammaan gaar ah ka helay halyeeyga reer Brazil ee Cafu
(Liverpool) 23 Feb 2021. Halyeeyga kubadda cagta dalka Brazil ee Cafu ayaa sheegay in xiddiga reer Massar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka, islamarkaana uu tusaale u yahay ciyaartoyda dadaalka badan.
Wargeyska “AS” ayaa wuxuu shaaciyay wareysi uu bixiyay Halyeeyga kubadda cagta dalka Brazil ee Cafu, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaa jira ciyaartoy badan oo Carab ah oo wacdaro ka dhigay Yurub, waana wax wanaagsan. Mohamed Salah waa tusaale weyn.”
“Waxa uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka isaga oo si adag uga shaqeynaya horumarka.”
“Waxaan ku aragnay Liverpool, iyo kahor Roma, waxaa caddaatay inuu ka mid yahay ciyaartoyda adduunka ugu sarreysa.”
Xiddiga reer Masar, oo 28 jir ah, wuxuu hore ugu soo ciyaaray kooxaha kala ah, Basel, Fiorentina, Roma, iyo Chelsea.
Laakiin kooxdiisa haatan ee Liverpool ayaa lagu tiriyaa inay tahay kooxdiisa ugu fiican ee xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, maadaama uu kula guuleystay horyaalka Premier League iyo Champions League.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Atletico Madrid iyo Chelsea ee tartanka UEFA Champions League oo la shaaciyey
Muxuu Toni Kroos ka yiri wararka Real Madrid la xiriirinaya xiddigaha Mbappé iyo Haaland?